Kenya iyo Ethiopia oo ka wada hadlay arimo ku saabsan Dekadaha dalka Soomaaliya. – Soomaali 24 Media Network
Kenya iyo Ethiopia oo ka wada hadlay arimo ku saabsan Dekadaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay wada hadal dhex maray sfiirka Ethiopia u fadhiya wadankaasi Kenya iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Safiirka Ethiopia ee dalka Kenya ayaa u ballan qaaday madaxweynaha dalka Kenya Mr Kenyatta inaysan wax saamayn ah dalkiisa ku yeelan doonin heshiisyo dhanka Dekadaha ah oo ay la gashay Dawladda Ethiopia wadamo ay ka mid tahay Soomaliya.
Males Alem oo ah safiirka Nairobi u fadhiya Ethiopia ayaa u xaqiijiyey Madaxweynaha Kenya inaysan waxba iska bedeli doonin heshiisyo dhanka badda ahaa oo dhex maray kol hore labada dawladood.
Kenya ayaa mudooyinkii ugu danbeeyey walaac ka muujinaysay heshiis dhanka dekada ahaa oo dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia kaa oo dhigayey in dawladda Ethiopia ay maal gashato 4 Dekadood oo ku yaalla Soomaaliya ayadoo u arkaysay inuu saamayn taban ku yeelan karo dhaqaalaha ka soo gala badeecadaha ay Itoobiyaanku kala soo degaan Dekadaheeda.
Labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday heshiisyo kale oo ay dawladda Ethiopia kula ku jirto Djibouti iyo Eritrea oo ay dhawaan la saxiixatay heshiis ku saabsan Dekadda magaalada Casab ee dalka Eriterea.
Ethiopia oo ah dalka ugu shacbiyadda ballaaran geeska afrika ayaa ku dedaalaysa inay hesho Dekado baahsan oo ay shacbkeedu kala soo degaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ayadoo hadda inta ugu badan shacabka Ethiopia iyo dawladuba ay adeegsadaan Dekadaha dalka Djibouti.
Kenya iyo Ethiopia ayaa waxay horay u kala saxiixdeen heshiis ku saabsan dhismaha Dekada deeganka Lamu iyo waddo tareen oo isku xirta deegaankaas iyo dal weynaha Ethiopia si loo fududeeyo daabulaadda badeecadaha laga soo dejin doono markii la dhiso Dekadda Lamu.
Wada hadlka labada dhinac ayaa imaanay xilli uusan wanaagsanayn cilaaqaadka diblamaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay Kenya shaki ka qabtay heshiisyo dhex maray qaar ka mid madaxda geeska afrika oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu digey inay u safraan wadamo ay ku jirto somalia.
Next Muuse suudi oo muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore shiikh shariik shiikh axmed